China magirazi emitambo magirazi anomhanya hove gorofu kuchovha Polarized Sports magirazi ezuva PC hafu furemu 100% UV400 Kudzivirira Kugadzira uye Fekitori | Baolai
mitambo Sunglasses inomhanya hove gorofu kuchovha Polarized Sports magirazi ezuva PC hafu furemu 100% UV400 Kudzivirirwa
1. polycarbonate furemu
4.3 LENSI DZINOGONESHANA- Iyo lens rese 100% UV400 yekudzivirira kupfeka, inovhara 100% inokuvadza UVA & UVB mwaranzi. Dzosera ruvara rwechokwadi, bvisa mwenje unoratidzwa uye wakapararira mwenje, ita kuti nzvimbo dziwedzere kujekesa uye nyoro uye dzivirira maziso zvakakwana. Iyo Yekutanga ine mavara lenzi, yeyero yeyemabasa ehusiku, iyo bharandi yakarongedzwa yekutyaira uye zvimwe zviitiko.
5.CLEAR, SUPERLIGHT, STYLISH uye DURABLE- Yakanaka Rimless bhachi furemu dhizaini inogonesa yakajeka yakaderera chiratidzo chiratidzo. Dhizaini yakareruka yakanaka kune mudhudhudhu uye bhasikoro, kuchovha, kumhanya, hove, kumhanya, kutsika, kukwira, kufamba kana zvimwe zviitiko zvekunze. Mufashoni uye dhizaini dhizaini, iine hupfumi hwemavara musanganiswa wemafuremu uye lens. Polycarbonate lens uye mafuremu zvinokanganisa, kukwenya kusagadzikana, kusimba uye kusaputsika.
6.SOFT RUBBER NOSEPAD, Rega Mhuno Yako Inzwe Kunyaradzwa Paunenge Uchipfeka Torege Magirazi egirazi eMabhasikoro Ekumhanya Fishing Gorofu.
7.LIFETIME KUKUNDA WARARANTI PAKUMIRA- Mafuremu uye lens hazviputsike pasina njodzi yekutenga. Kana paine chero dambudziko rakatyoka rikaitika, bata mutengesi weTorege usingazeze kugadzirisa dambudziko kusvikira wagutsikana. Torege inopa hupenyu hwese mushure mekutengesa sevhisi kune ese maTorege zvigadzirwa.
Chinhu icho kwete. 10889-5328Y
1, Tinogona laser LOGO pane yemishenjere magirazi CHETE kana qty pamusoro pe50pcs! 2, Tinogona kusaina "yemhando garandi" uye "pa-nguva yekuendesa garandi" kune vedu vatengi! 3, Inogona kupfuura CE, SGS-UV400, FDAzvitifiketi, izvo zvinogona kutengesa kune yepasirese zvakachengeteka!
Pashure: Yakanakisa magirazi emitambo anomhanya ehove kuchovha mabhasikoro Polarized Sports magirazi ezuva PC hafu furemu 100% UV400 Kudzivirirwa - Baolai
Zvadaro: Aviator Sunglass yeVarume 100% UV Dziviriro Goggle Alloy Chimiro
Kubata Magirazi eSungarararidzwa
Kubhururuka Kwekuvheneka Magirazi
Polarized Ekukwirisa Magirazi egirazi
Kupfura Kuchengetedza Magirazi
Zuva Magirazi Ebhasikoro
Factory mukuru wekutengesa Anodzivirira magirazi emam ...
Vana Cartoon Dhinda Anti-Mhute Chiso Chengetedza Yakachengeteka ...
Transparent chengetedzo kumeso nhovo magirazi Chimiro
Kuchengetedza Magirazi Pamusoro Pegirazi Goggles Inodzivirira ...
Hombe stock yeziso yekuchengetedza magirazi eVANHU ...